HPV självprov - somaliska - Public_Cellprov
Länkstig, du är på sidan HPV självprov - somaliska
Muddadii uu jiray cudurka safmareenka corona lama qaadi karin tijaabada unugyada laga soo qaado qaybta hore ee makaanka ee caadiyan lagu qaadi jiray xarumaha qaabilaadda ummulisooyinka. Taasi waxay abuurtay saf taas oo keentay in dad badan sugayaan inay reebaan tijaabada unugyada makaanka. Bilowgii juun waxaa sidaas darteed la bilaabay tijaabo qofku isagu iska qaadi karo oo lagu baarayo fayruska HPV, kaas oo kabaya tijaabada unugyada makaanka laga soo qaado ee qaabilaadda ummulisada lagu qaado.
Warbixinta boggaan waxay qusaysaa gobolka Västra Götaland
Ujeedada laga leeyahay in la bilaabo in qofku isagu iska qaado tijaabada fayruska HVP waa in dad badan laga baaro kansarka afka hore ee makaanka ku dhaca muddada uu jiro cudurka safmareenka ah ee socda. Tijaabada qofku iska qaadayo ee HPV waxaa loo fidinayaa qaar ka mid ah dadkii cudurka safmareenka dartiis aan loogu yeerin tijaabada unugyada makaanka intii lagu gudo jiray 2020 iyo 2021.
Tijaabada qofku isagu iska qaadayo waa la isku hubaa oo waxay la waxtar tahay tijaabada ay qaaddo ummuliso.
Haddii aad heshay ballan aad ugu tagaysid ummuliso waxaa markaas lagaga qaadayaa tijaabada unugyada makaanka sidii caadiga ahayd. Ma dalban kartid qalabka tijaabada la iskaga qaado haddii ballan ay kugu yeertay ummuliso.
Ma lagu soo bandhigay inaad dalbatid qalabka tijaabada lagu qaado si aad iskaga qaadid tijaabada HPV, (waxa loogu yeero iskaa iskaga qaad tijaabo ama iskaa isku baar) waa inaad dalbatid in guriga lagugu soo diro sida ku cad tilmaamaha warqadda ku qoran.
Tijaabada adigaa kasoo qaadaya xubinta taranka cambarka (siilka). Qoriga suufka afka hore ku leh ma ahan khasab inuu gaaro afka hore ee makaanka. Tijaabada waxaad kaddib u diraysaa shaybaarka si looga baaro fayruska HPV. Tilmaamaha sida loo qaado baa la socda qalabka tijaabada lagu qaado.
Haddii tijaabada ay muujiso inaad qabtid fayruska HPV waxaa ballan lagaga qaban doonaa ummuliso si lagaga qaado tijaabo (saami) la baari karo oo lagu ogaano karo HPV iyo haddii uu jiro isbeddel ku yimid unugyada. Markii tijaabada la baaro waxaa la ogaan karaa haddii uu HPV kugu harsan yahay iyo haddii uu jiro isbeddel ku yimid unugyada. Haddii lagaa helo isbeddel dhanka unugyada ah waxaa lagugu yeeri doonaa qaabilaadda cudurrada haweenka si baaritaan dhamaystir ah lagugu sii sameeyo.
Warbixin intaa dheer
Senast uppdaterad: 2021-06-18 09:54